aqoonsado muhiimadda IPV6 ee internetka maanta
Si aad u hesho Aasaaska IPV6 iyo hirgalinteeda shabakada deegaanka
Faham ifafaale la xidhiidha IPV4 / v6 wada-noolaanshaha
aqoonsado Talaabooyinka iyo xalalka jira ee ku wajahan isku dhafka IPv6 iyadoo ku xiran macnaha guud
IPv6 waa a farsamada lagama maarmaanka ah horumarinta internetka maanta iyo sanadaha soo socda. Sidaa darteed, Master IPV6 hadda waxay lama huraan u tahay qof kasta oo ku lug leh hawlgelinta iyo hawlgalka shabakadaha.
MOOC Objectif IPV6 wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hesho xirfadaha aad ku fahmi karto hab-maamuuska iyo hababka la xiriira hawlgalkiisa. Iyadoo loo marayo daraasado kiis iyo shaqo la taaban karo, koorsadan waxay sidoo kale qaadanaysaa a hab hawleed ku jihaysan.
yoolka IPV6 Diisambar 19, 2021Tranquillus
READ Qandaraaska muddada-go'an: suurtagalnimada dejinta tirada cusboonaysiinta iyo muddada sugitaanka heshiiska shirkadda oo la kordhiyay illaa Juun 30, 2021
horeMadaxtooyada Faransiiska ee Golaha Midowga Yurub